ओलीकाे प्रश्न- परमादेश त पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो, किन एकजनाको राजीनामा माग्नुहुन्छ? - Malayakhabar
होम पेज फिचर ओलीकाे प्रश्न- परमादेश त पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो, किन एकजनाको राजीनामा माग्नुहुन्छ?
ओलीकाे प्रश्न- परमादेश त पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो, किन एकजनाको राजीनामा माग्नुहुन्छ?
काठमाडौं:= राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भाग खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बचाउ गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, न्यायालयमा विवाद खडा गरेको, मुद्दाहरूमा स्वार्थ प्रेरित सुनुवाइ भएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेको प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली लाग्नुभएको हो । अदालतमा देखिएको विवादका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले मुख नखोलेका बेला अध्यक्ष ओलीले जबराको बचाउ गर्दै संसद् पुनःस्थापना गर्ने न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतकै १५ न्यायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले पद त्याग्नुपर्ने पक्षमा उभिएर इजलास बहिष्कार गरिरहेका बेला ओलीले संसद् पुनःस्थापना गर्ने न्यायाधीशहरूको राजीनामा माग्नुलाई विश्लेषकहरूले ओली जबराको बचाउमा लागेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार लगायतबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले संसद् पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने न्यायाधीशहरूको राजीनामा माग गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति लक्षित गर्दै पाँचैजनाले परमादेश जारी गर्ने तर एकजनाले मात्रै किन राजीनामा दिनुपर्ने ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले पार्टीको पालिका अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सर्वोच्च अदालतमा आफैँ देखिएको छ तमासा । श्रीमान् न्यायाधीशहरू, उहाँहरू आफैँ कसले के गरेको थियो । उधिन्न थाल्नुभएको छ । र उधिन्दै जाँदा निक्लिँदै जान थालेका छन् कुराहरू । परमादेश त एकजनाले होइन, पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचैजनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ ? श्रीमानज्यूहरू । पाँचैजनाले परमादेश गरेर देशलाई यो हालतमा पु¥याउनुभएको छ त । पाँचैजनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र ?’
अदालतका न्यायाधीशहरूबाट नै अहिले सर्वोच्चको मानमर्दन गर्ने काम भइरहेको आरोप पनि अध्यक्ष ओलीले लगाउनुभएको छ । अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयतर्फ संकेत गर्नुहुँदै उहाँले इजलास गठनको विषयमा भएका अभ्यासहरूको पनि स्मरण गराउनुभयो । संविधानले सुरक्षित गरेको राष्ट्रपतिको अधिकारसमेत मिचेर कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समय तोकेर परमादेश जारी भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । मुद्दा कुन पक्षले हा¥योभन्दा पनि न्याय प्रणाली पारदर्शी नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिका अधिकारहरू धावा बोलेर २४ घण्टाभित्र यतिमा यति बजेभित्र यस्तो ढंगले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईंहरू अहिले पोल खोलाखेल गर्दै हुनुहुन्छ । मलाई चिन्ता कुन पक्ष हा¥यो, कुन पक्ष जित्यो भन्ने होइन । मेरो चिन्ता लोकतन्त्र जित्नु पर्दछ । हाम्रो न्याय प्रणाली स्वच्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ । र हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति, हाम्रो न्यायिक संस्थाप्रति, न्याय निरूपणप्रति, न्यायिक निकायहरूप्रति आम जनताको आशा, भरोसा, विश्वास हुनुपर्दछ कि अन्त पाइनँ न्याय भने अदालतमा गएपछि पाउँछु न्याय भन्ने कुरा विश्वास हुुनुपर्दछ ।’ अध्यक्ष ओलीले अदालतलाई मर्यादित, निर्विवाद र जनताको विश्वासको केन्द्र बनाउन पनि पटक–पटक आग्रह गर्नुभयो ।
‘सरकार पूर्ण असफल’
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको दाबी पनि गर्नुभएको छ । उहाँले राज्यका तीनवटै निकायहरू अशक्त भइरहेको पनि बताउनुभएको छ । सरकारका बारेमा टिप्पणी गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले संसद्को नेतृत्व नै ठिक नभएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार त सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । अब राज्यका तीनै अंग व्यवस्थापिका संसद्, अशक्त भइराखेको छ । असफल भएको छ र त्यसको नेतृत्व यस्तो विवादास्पद छ। विवादमा परेकाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्दै हिँडेका छन, तिनै मान्छेहरू विवादमा परेको आफ्नै मान्छे उहाँहरूको किन आफ्नै मान्छे भन्नुपर्‍यो भने उहाँ निष्पक्ष त हुन सक्नुभएन । अरूको निष्कासनको पत्र तुरुन्त ढोकाबाटै मागेर टाँस्ने, नेकपा एमालेका निष्कासनको पत्र विचाराधीन राखेर निर्वाचन आयोगलाई नेकपा एमालेको विरुद्धको गतिविधि गर्नका लागि सजिलो बनाइदिने त्यो काममा त सभामुख संलग्न हुनुभयो ।’
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एमालेले तीनवटै तहको निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोहीअनुसारको तयारीमा जुट्न पनि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘अब हामी चुनावतर्फ जाँदैछौं । तीनै तहको निर्वाचनतर्फ । मिति कुन-कुन हुने हो आफ्नो ठाउँमा छ, छोडिदिऊँ । जहिले होला चुनाव, हामी चुनावतर्फ जाँदैछौं । र चुनावमा हामीले देश बिग्रन नदिने गरी, संविधानको रक्षा हुने गरी, लोकतन्त्रको रक्षा हुने गरी, विकास निर्माणको गति, जो अवरुद्ध गरिएको छ । त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने गरी अस्तव्यस्त बनाइएको राजनीति, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गरी हामीले आगामी निर्वाचनहरूमा परिणाम प्राप्त गर्नु पर्दछ । त्यसमा निम्ति तयारीमा जुट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्न आन्तरिक र बाह्य रूपमा घुसपैठ भएको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले विरोधीहरूलाई खुसी पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले एकताबद्ध एमाले मुलुकको आवश्यकता भएको र सोही आवश्यकता पूरा हुने गरी पार्टीका हरेक नेता, कार्यकर्ताहरूले काम गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
अघिल्लो लेख कञ्चनपुरका बाढीपीडितको गुनासो, ‘बाढीबाट त बाँच्यौँ, भोकै कसरी बाँचौँ?’
पछिल्लो लेख प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बन्दै।